सबै भन्दा साधारण साना एसईओ सेवाहरू के हो?
एक साना व्यवसायको लागि दायाँ एसईओ सेवा चयन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ. यदि तपाईं यी उद्यमकर्ताहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ जसले निर्णय गर्न सक्नुहुन्न कुन एसईओ उपकरण छनौट गर्ने, त्यसपछि तपाइँ निश्चित रूपमा निम्न लेख पढ्नु पर्छ.
तलका जानकारीले तपाईंलाई बुझ्न मद्दत गर्नेछ कि एसईओ उपकरणहरू साना व्यवसायका लागि सबै बारेमा छन्. पोस्ट पढ्न पछि, तपाईंको व्यवसायको लागि एसईओ सेवा चयन गर्दा तपाईंको धेरै कम संदेह हुनेछ. त्यसैले, बिन्दुको नजिक.
शीर्ष एसईओ सेवाहरु को साना व्यवसाय:
कीवर्ड रिसर्च को महत्व
कीवर्ड शोध हो कुनै पनि एसईओ प्रोजेक्ट को मुख्य तत्व पछि देखि यो सबै खोज इन्जिन अनुकूलन को लागि आधार मा कार्य गर्दछ. तपाईंको रैंकिंग सुधार्ने योजना सिर्जना गर्दा पहिलो कुरा गहिरो खोजशब्द अनुसन्धान गर्दैछ जुन कुन कुञ्जी शब्दहरू लक्षित गर्न मद्दत गर्दछ. आदर्श रूपमा, तपाईंको डोमेनमा प्रत्येक वेब पृष्ठलाई दुई सान्दर्भिक र अनौठो कुञ्जी शब्दहरू माथि लक्षित गर्नु पर्दछ. सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईसँग पर्याप्त पृष्ठहरू छन्, पर्याप्त खोजशब्दहरू लक्ष्यीकरण गर्नका लागि तपाईंको व्यवसायको प्रमुख क्षेत्रहरू राख्नुहोस्. लामो खोज इञ्जिन किन्न खोज्नुहोस्. दायाँ किबोर्डहरू चयन गर्ने प्रक्रिया तीन चरणहरूमा घटाइएको छ:
कीवर्ड प्रासंगिकता निर्धारण गर्दै;
तपाईंको सेवाकृत भौगोलिक क्षेत्रमा चुनेको कीवर्ड खोज्ने व्यक्तिहरूको संख्या निर्धारण गर्नुहोस्;
कीवर्ड प्रतिस्पर्धा को निर्धारण.
व्यावसायिक आविष्कारको साथ प्रासंगिक कुञ्जीहरू तपाईंको उच्च प्राथमिकता हुनुपर्दछ. जाहिर छ, अधिक व्यक्ति तपाईंको खोजशब्द को लागि खोजी गर्दै छन्, राम्रो. यो उल्लेखनीय छ कि निम्न प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिइएको छ - यो सफल हुनको लागि कम समय र पैसा चाहिन्छ. Semalt विशेषज्ञहरूले सिफारिस गर्छन् कि तपाईं कीवर्ड अनुसन्धान प्रदर्शन गर्न WordTracker छनौट गर्नुहुन्छ. सही हुनुको अतिरिक्त, यो प्रयोग गर्न सजिलो छ.
पृष्ठ रचना मेट्टर
एक व्यापक खोजशब्द अनुसन्धान संग एकपटक गरेपछि, अर्को चरणको बारेमा तपाई सोच्नु हुन्छ कि नयाँ वेब पेजहरु को निर्माण को लागी चुनेको कुञ्जीशब्दहरू. नयाँ पृष्ठहरू बनाउँदा, निम्न लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रयास गर्नुहोस्:
तपाईंको वेब पृष्ठहरू लामो हुनु पर्छ (एक हजार शब्दहरू सम्म);
प्रत्येक पृष्ठमा अद्वितीय र बहुमूल्य सामग्री हुनु आवश्यक छ;
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि प्रत्येक पृष्ठले पाठकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दछ;
तपाईंको यूआरएल सरल र संक्षिप्त राख्नुहोस्. ती डोमेनको मूलको नजिक हुनुपर्छ;
लक्ष्यीकरण को नियम दो पृष्ठ मा दुई देखि अधिक खोजशब्दों को प्रतिमा नहीं सम्झना.
पृष्ठ अनुकूलन कुञ्जी हो
तपाईलाई विचार गर्नु पर्ने अर्को कुरा पृष्ठ अनुकूलन हो. बस राख्नुहोस्, तपाइँले आफ्नो वेब पृष्ठहरू खोज इन्जिनको लागि अनुकूलन गर्न आवश्यक छ. सबै पछि, खोजी इञ्जिनहरू केवल कम्प्यूटर हुन्, र तपाईंको लक्ष्य निश्चित छ कि उनीहरूले तपाईंको पृष्ठहरूको विषय बुझ्न सक्दछ. यसरी, सामग्रीमा परिमार्जनहरू र साथै तपाईंको वेब पृष्ठहरूको लागि एक तकनीकी अद्यावधिक बनाउनु पर्छ.
यस्तो सानो अप्टिमाइजेसन सानो व्यवसायहरुको लागी उच्च अनुशंसित छ किनकी यो खरोंच को नयाँ पेजहरु को निर्माण भन्दा अधिक सस्ती छ. यो प्रायः यो पृष्ठमा आकर्षक र सान्दर्भिक शीर्षक ट्यागको सृजना वा पाठ अनुकूलन लन्च गरी खोजी इन्जिन द्वारा अझ राम्रो बुझ्नको लागी साना साना समायोजन चाहिन्छ।.
लपेट अप अप
तपाईंको सानो व्यवसायको लागि उत्तम एसईओ सेवा चयन गर्दा, यो एसईओ को यस्तो पहलुहरु को खोजशब्द अनुसन्धान, पेज निर्माण, र पेज अप्टिमाइजेशन. लिङ्क इमारत र प्राविधिक लेखा परीक्षा पनि ध्यान दिनको लागि योग्य छन्. निम्न मार्गदर्शक पालन गर्नाले तपाईंलाई सही ट्रयाक राख्दछ र तपाईंको सानो व्यवसायलाई सवारी नगर्ने निश्चित छ Source .